Polyarthritis: लोक उपचार को उपचार।
गठिया, जो धेरै वृद्ध रुचि राख्नुहुन्छ उपचार - एक एकदम साधारण रोग। यो रोग खतरनाक मानिन्छ छैन, तर यो असुविधाको धेरै ल्याउँछ।
गठिया को उपचार को लागि, तपाईंले सफलतापूर्वक प्राप्त यो रोग को छुटकारा मदत गर्न सक्छ कि धेरै परम्परागत विधिहरू आनन्द उठाउन सक्छौं।
Polyarthritis: लोक उपचार को उपचार
उपचार को राम्रो तरिका - यो एक आहार र सना छ। प्रारम्भिक गठिया 40-45 वर्ष को उमेर मा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया सुनिएको हात र खुट्टा, यो हिंड्न गाह्रो हुन्छ। निम्न सुझावहरू यी लक्षण छुटकारा मदत गर्नेछ प्राप्त, बस निर्देशनहरू पालना महिना - पूर्ण रिकभरी सम्म।
उपचार को तरिका:
- thyme र गाजर भन्दा माथि को tincture पिउन;
- एक विशेष आहार पालन गर्न: (एक समयमा दुई तीन 150 ग्राम लागि एक हप्ताको समय) माछा खान;
- एक भाप स्नान (तीन पटक एक हप्ता), जोडहरुको मह र नुन मा rubbed।
गठिया, नुनीन ऊन को उपचार
सन्टी र घाँस knotweed तीन चमचा लिन धेरै र धेरै जंगली जामुन उठ्नुभयो। त्यसपछि QUART जार मा वजन राख्न र शीर्ष पानी माथि उम्लिरहेको संग भर्नुहोस्। 20 मिनेट को लागि एक पानी स्नान मा जार ठाँउ। समाधान नुन को उनको चार चमचा मा त थियो। त्यसपछि, यो न्यानो जलसेक मा, भिजेको ऊनी कपडा केही मिनेट को लागि, यो भोकमरी र aching जोइन्टहरूमा लागू हुन्छ।
गठिया उपचार हर्बल स्नान
सी चलिरहेको गठिया पनि आधुनिक औषधी सम्हाल्न सक्दैन। एक व्यक्ति दुखाइ aching, आफ्नो खुट्टामा खडा र बलियो महसुस गर्न, कुरा सम्हाल्न सक्दैन। तर मानिसहरूको पैसा स्थिति सुरक्षित हुनेछ।
सुरुमा, तपाईं हटाउन सक्नुहुन्छ जोडहरुको को सुनिंनु वोदका कंप्रेशर्स को मदद संग, तर पछि तिनीहरू अप्रभावी हुन्छन्। त्यसपछि, प्रयोग माटो wraps, थप कडाई छन् जो संयुक्त असर गर्छ। burdock पात र rhizome, nettle, आटिचोक, knotweed: यो औषधीय जडीबुटी को स्नान मदत गर्न राम्रो पनि छ। स्नान दैनिक, एक दिन 30 मिनेट को लागि, प्रयोग गर्नुपर्छ पानी तापमान संग - 36 डिग्री। उपचार को एक महिना पछि, अवस्था नाटकीय सुधार हुनेछ।
को जलसेक स्नान संग समानान्तर मा knotweed लिन र2तीतो मरिच (पीसने गर्न) दल्नु विशेष जोइन्टहरूमा, एउटा वस्तु RUB गर्न मनमोहक छ। datura बीउ चम्चा, methylated आत्माको र इन्धन उत्पादन (स्ट्रोक) को दुई र आधा चमचा को आधा लीटर - यो सबै 15 दिन जिद्दी छ।
जलसेक knotweed2वर्ष लिनुपर्छ, र पनि स्नान (छैन दुई वा तीन भन्दा बढी पटक एक हप्ताको) प्रयोग गर्न - बिस्तारै हुनेछ।
Polyarthritis, माटो उपचार
यसलाई अब झन् लोकप्रिय माटो उपचार बन्ने छ, यो साँच्चै प्रभावकारी छ। यसो गर्न, तपाईं नीलो माटो डायल र खट्टा क्रीम जस्तै, एक मोटी मिश्रण गर्न यो धेरै तातो पानी खन्याउन गर्न आवश्यक छ। अर्को, रोगी गरेको संयुक्त मा तय गर्न आवश्यक छ जो कपडा, मा माटो राख्नु। उपचार को एक महिना पछि, रोग पूर्ण तरिका मा आयोजित गरिनेछ।
Polyarthritis, उपचार अजवाइन
यो विधि एकदम लोकप्रिय छ। हामी एक मासु Grinder अजवाइन मा 0.5 किलो र बोक्रा संग कागति को नै नम्बर पीसने गर्नुपर्छ, मह आधा किलोग्राम थप्नुहोस्। तीन दिनको लागि खडा गरौं, त्यसपछि दुई चमचा तीन वा एक दिन चार पटक, भोजन अघि एक घण्टा लिन। संयुक्त दुखाइ पारित गर्नेछ, र तिनीहरूले सार्दा गरिनेछ।
Rheumatoid गठिया, लोक उपचार को उपचार: cinquefoil, galangal
यदि rheumatoid गठिया विकास, सबै जोइन्टहरूमा बांध, यसलाई बस्न र हिँड्न, एक चम्चा पकड गर्न असम्भव छ, सबै आन्दोलनहरु दुखाइ कारण। यस मामला मा Sabelnikova-Kalganova tincture खाना पकाउनु भन्दा राम्रो छ। दुई चमचा एक दिन तीन पटक हुनुपर्छ यो जलसेक लिनुहोस्। cinquefoil र galangal को RUB मलम जोइन्टहरूमा एक दिन तीन वा चार पटक गर्न आवश्यक छ। र दुखाइ बीस दिन पछि पूर्ण पारित हुनेछ।
tinctures को तयारी को लागि rhizomes Comarum 200 ग्राम र 100 ग्राम आवश्यक जरा Potentilla (galangal) को। यो सबै पाउडर पीसने र3लीटर जार मा खन्याउन यसलाई शीर्ष पानी थप्न र अन्धकारमा 21 दिनको लागि प्रेस आवश्यक छ।
सबै भन्दा साधारण छाला र छोराछोरीको तीव्र श्वसन रोग। आमाबाबुको नोट
को घाँटी मा Streptococci: लक्षण, कारण र उपचार
Lymphadenitis लक्षण र उपचार
Ischuria - यो छ ... सम्भव कारण, मूत्र अवधारणा को उपचार
एक बच्चा मा aureus: लक्षण र उपचार
चिसो मा कान राखे कारण के हो?
गर्भावस्था को समयमा पोषण
अनावश्यक आवेदन, वा कसरी बन्द रंग छाला देखि एक कपाल धुन?
Akvafumigator "raptor": समीक्षा। Cockroaches, bedbugs, चींटियहरुलाई, fleas, झिंगा, लामखुट्टे को Fumigator
रीगल लिली: धेरै तरिकामा प्रजनन
लिनक्स प्रयोगकर्ताहरूको सूची कसरी प्रदर्शन गर्न?
दावी मा एक समीक्षा कसरी लेख्न
नदी वोल्गा को आर्थिक प्रयोग। नदी यात्री परिवहन। सामान नदी परिवहन
विश्व उड्डयन को पौराणिक कथा - विमान "Boeing"
बाल हानि लागि चक्की के हुन्
किन पात टमाटर बिरुवा मा पहेंलो बारी गर्छन्? कसरी सामना गर्ने?
एक पाहुना के हो?